खानपान समाचार अपडेट : Page6of7: Koshi Online
अण्डाको पहेँलो भाग खाँदा धेरै फाइदा हुन्छ कि सेतो भाग ?
अण्डामा प्रोटिन, भिटामिन, फ्याटी एसिड र खनिज पदार्थहरु निकै पाइने गर्छ । एउटा सिङ्गै अण्डामा पाइने आधाभन्दा बढी प्रोटिन यसको सेतो भागमा पाइन्छ । सेतो भागमा सेलेनियम, भिटामिन ’डी’, भिटामिन ’बी ६’, भिटा
मङ्गलबार, १७ असार, २०७६
हरेक कुराको फाइदा संगसंगै बेफाइदा पनि हुने गर्छ । हामीले कहिलेकाही शरीरलाई फाइदा हुन्छ भनेर खाने फलफुल वा सागसब्जीले हामीलाई उल्टै नकारात्मक असर गरिरहेको हुन्छ । त्यस्तै, शरीरमा विभिन्न रोगले सताईरहेक
कस्ता मानिसहरुले खान हुँदैन तीते करेला ?
विराटनगर, करेला खनिज पदार्थ युक्त तथा औषधीय गुणले भरपूर सब्जी हो । खादा स्वादमा तितो भएपनि करेलामा फस्फोरस , क्याल्सियम , प्रोटिन, कार्बोहाड्रेट , भिटामिन ’ए’, भिटामिन ’बी’ तथा फाइबर प्रसस्त मात्रामा
स्वाद र सुगन्धको लागि प्रयोग गरिने हरियो धनियाँका फाइदाहरू
हरियो धनियाँलाई स्वाद र सुगन्धको लागि भान्सामा मसलाको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । यसले हाम्रो तरकारीलाई स्वादिलो र वास्नादार बनाउँछ । यसलाई पिसेर अचारको रुपमा, तरकारीमा, दाल वा अन्य परिकारमा वा काचै प्रयोग
‘ग्रीन टी’का केही फाइदाहरू, कहिले र कसरी पिउने ?
हामीले बिहान तथा दिउसो चिया खाने गर्छौं । हामीहरुले धेरै जसो कालो चिया, दुध हालेको चिया, अधुवा चिया वा ग्रिन टीको प्रयोग गर्ने गर्छौं । यी विभिन्न प्रकारका चिया मध्ये ग्रिन टी हाम्रो स्वास्थ्यको लागि
माछाले निम्त्याउन सक्छ यस्ता समस्या
माछा खाने गर्दा यसले हाम्रो मस्तिष्कलाई सधैं ताजा र तेज राख्नमा मद्दत पुर्याउँछ । हामीले मासु भन्दा पनि माछा धेर खानु पर्छ । मासु पचाउनका लागि झन्डै ३२ देखि ३६ घन्टा लाग्ने गर्छ भने माछा पचाउनका लागि
आज असार १५ गते अर्थात् दही चिउरा खाने दिन, यस्ता छन् दही चिउरा खानुका फाइदा
आज असार १५ गते वा आज दही चिउरा खाने दिन पनि भनिन्छ । पहिला देखि नै परम्परागत रुपमा चलि आएको दहि चिउरा खाने दिनमा दहि चिउरा खाएर आफ्नो दिनको सुरुवात गर्ने गरेका छन् । परम्परा र संस्कृतिका साथ साथै दहि
आवश्यकताभन्दा धेरै टमाटरले निम्त्याउन सक्छ पत्थरीको रोग
बारी वा बजारमा सजिलै उपलब्ध हुने तरकारी टमाटरलाई हामीले सुप, सलाद, अचार, झोल, सस आदि बनाउनका लागि प्रयोग गर्ने गर्छौं । टमाटरमा भिटामिन ’ए’, भिटामिन ’सि’, भिटामिन ’के’, ’बी १’, ’बी ३’, ’बी ५’, ’बी ६’,
गर्मीमा आलुबखडा खानुका फाइदाहरू यस्ता छन्
आलुबखडा नेपालमा पाइने एक किसिमको फल हो । यो फल अमीलो, गुलियो हुन्छ र यसबाट अचार र जाम पनि बनाइने गरिन्छ । यो रातो, कालो, पहेंलो र कतै–कतै हरियो रंगको पनि हुने गर्छ । आलुबखडाको स्वाद गुलियो र अमिलो हुन
बोक्रामा कालो दाग भएको केरा खानु लाभदायक
विराटनगर । स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी मानिने केरामा प्रसस्त मात्रामा सुगर र फाइबर पाइनुका साथै थाइमिन, नियासिन र फोलिक एसिडको रुपमा भिटामिन ए र बी पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ । पूर्ण रुपमा पाकेको के
धेरै गुलियो खाँदा लठ्ठ हुन्छ हाम्रो दिमाग, लाग्न सक्छ विभिन्न रोग
गुलियो खाएपछि हामीले तत्काल हामीलाई उर्जा, शरीरमा विभिन्न खालको शक्ति उत्पन्न भएको महसुस हुने गर्छ । त्यसैले, हामी भोकाएको बेला वा धेरै बल लाग्ने काम गर्नु अगाडी गुलियो खाने गर्छौं । तर, तत्काल शक्ति
पोलेको मकैका अनगिन्ति फाइदाहरु
मङ्गलबार, १० असार, २०७६
विराटनगर । मकै खानाले हाम्रो स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हामी धेरै मानिसहरुलाई थाहा भएको नै छ । मकै एक यस्तो तत्व हो जसमा पाकेपछि पनि आफ्नो गुण हराउदैन र अझ त्यसको साटो थप गुण बढ्ने गर
दैनिक कफी पिउनु फाइदा की बेफाइदा ?
विराटनगर । कफी एक पेय पदार्थ हो । कफीमा स्फूर्ति ल्याउने क्याफिन हुन्छ । यसले मानसिक र शारीरिक थकान मेट्छ, अल्छीपन र निद्रा हटाउँछ । ठिक्क मात्रामा कफीको सेवन गर्नुको हाम्रो शरीरको लागि फाइदा हुन्छ
विवाहपछि किन मोटाउछन् महिला ?
महिलाहरू विवाहपछि छिट्टै मोटाएको भनेर गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । दुब्ली भएका महिलाहरु समेत विवाहपछि मोटाउँछन् । विवाहपछि जिम्मेवारी बढ्नुका साथै काम पनि बढ्ने गर्छ । तनाबले त तौल घट्नु पर्ने हो । तर, व
तौल घटाउन खाेज्दै हुनुहुन्छ ? नगर्नुहाेस् यस्ता गल्ती
ब्यस्त जीवन, गलत खानपान, ब्यायाममा लापरवाही गर्दा अधिकांश व्यक्ति आफ्नो शरीरको तौलबाट दिक्क मानिरहेका हुन्छन । शरीरमा कार्वोहाइड्रेटको मात्रा बढ्ने र शरीर मोटाउने समस्याले गर्दा विभिन्न रोग लग्न सकिन
फर्सीको मुन्टाका अनगिन्ति फाइदाहरु
सोमबार, ०९ असार, २०७६
विराटनगर । अहिले बजार तथा घरको बारीमा फर्सीको पातको साग वा फर्सीको मुन्टा छ्याप छ्याप्ती पाइने गर्छ । फर्सीको सागमा पाइने विभिन्न पौष्टिक तत्वहरु हामीलाई स्वस्थ रहनका लागि शरीरमा निकै आवश्यक्ता पर्दछ
ब्रोकाउली खाँदा मात्र नभएर दल्दा पनि निको हुन्छ क्यान्सर
शुक्रबार, ०६ असार, २०७६
विराटनगर । ब्रोकाउली, काउली जस्तै हुन्छ । तर, यसको रंग हरियो हुन्छ । यसलाई तरकारीको रुपमा उपयोग गर्ने गरिन्छ । ब्रोकाउलीलाई मानब स्वास्थ्यका लागि औषधिको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । विभिन्न अनुसन्धानका अनु
चाहिने भन्दा बढी पानी पिउँदा पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा हानी
बिहिबार, ०५ असार, २०७६
विराटनगर । गर्मी अत्यधिक छ । यो समयमा तपाईले टाउको दुख्यो भन्नुहोस् वा पेट दुख्यो भन्नुहोस् एउटा सल्लाह अवस्य पाउनु हुने छ, पानी पिउनुहोस् भन्ने । पानीलाई जीवनको श्रोत मानिन्छ । यो हाम्रो शरीरका ल
बेलुका ढिलाे खाना खानुहुन्छ ? याे पढ्नुहाेस् ?
हाम्राे खाना खाने समय नहुँदा स्वास्थ्यमा समस्याहरु देखिन्छन् । दैनिक खाना खाने समय तालिका बनाउनु पर्छ । अझ बेलुका छिट्टै खाना खाने गर्नु पर्छ । जतिसुकै बढी खाना खाए पनि बेलुका चाँडै खानाले व
गर्मी मौसममा स्वस्थ रहन कस्ता तरकारी खाने ?
गर्मी मौसममा हामीले खानपानमा धेरै नै ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । धेरै स्वास्थ्य समस्या तथा फुड प्वाइजनिङका समस्याहरु गर्मी मौसममा धेरै मात्रामा हुन्छ । हाम्रो सानाे लापरवाहीले गर्दा बिरामी पर्न सक्छाै ।
खाना अपच भए के गर्ने, के नगर्ने ?
मङ्गलबार, ०३ असार, २०७६
खान नजानेर होस् वा धेरै खाएर होस् हामी नेपालीलाई पेटको समस्या अलि बढी नै हुन्छ । हामीले हाम्रो भोजनमा प्रतिदिन प्रोटिन, भिटामिन, कार्बोहाइड्रेड, खनिज तथा चिल्लो पदार्थलाई सन्तुलित मात्रामा खाने गर्नु
मुखमा आउने खटिराले निम्त्याउन सक्छ क्यान्सर
हाम्रो मुखभित्र, जिब्रो, गिजा तथा ओठ लगायतका मुखको भित्री भाग र कहिले काहीँ गालाको छेउमा मसिना सेता खालका खटिराले हामीलाई सताउँछ । जसले गर्दा दैनिक खान तथा बोल्नै नहुने गरि दुख्छ । हाम्रो शरीरमा भिट
पिज्जाका पारखीलाई खुसीको खवर, माेवाइल नचलाउँदा निशुल्क पिज्जा !
सोमबार, ०२ असार, २०७६
एजेन्सी । मोवाइलबिना मानिसको दैनिकी गतिविधी सञ्चालन गर्न नै गाह्रो छ । प्रविधीकाे विकाससँगै मोवाइल फोन प्रयोग गर्नेको संख्या धेरै छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको एक रेष्टुरेन्टले मोवाइलको प्रयोग कम
मदिरा, धुम्रपान र ड्रग्सको कुलत हटाउने तोरीको सागका फाइदाहरु
आइतबार, ०१ असार, २०७६
हामीले दैनिक रुपमा अंकुरित भोजन, हरियो सागसब्जी, मौसम अनुसारको तरकारी तथा फलफुलको सेवन गरेमा हामी स्वास्थ्य रहन सक्छौं । हामीले खाने गरेको तोरीको साग बजारमा सहजै रुपमा पाइनुका साथै यसलाई आफ्नै घरको बा
तितो भएपनि स्वास्थ्यकालागि फाइदाजनक करेला
हेर्दा हरियो र सेतो देखिने स्वादमा भने तितो हुने करेला खनिज पदार्थ युक्त तथा औषधीय गुणले भरपूर सब्जी हो । क‍रेलामा फस्फोरस , क्याल्सियम , प्रोटिन, कार्बोहाड्रेट , भिटामिन ए, भिटामिन बी तथा फाइब
दम रोगीले के के खाने ?
विराटनगर । दम अर्थात अस्थमा दीर्घ रोग हो । यो रोगीले खानपानमा धेरै नै ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । दमरोगीको सास फेर्दा सक्रिय हुने मांसपेसी विभिन्न कारणले कमजोर हुँदै जाने हुदाँ समस्या पनि बढ्दै जान्छ ।
क्यान्सर हुन नदिने हरियो सिमी खानुका फाइदाहरू
शरीरका विभिन्न रोगहरु हटाउन र शरीरलाई स्वास्थ्य राख्नका लागि हरियो तरकारीहरू मज्जाले खानुपर्छ । हरियो सिमीमा विभिन्न खालका प्रोटिन, फाइबर, भिटामिन ए, सी र के का साथै फोलेट, थियामिन, रिबोफ्लाभिन, फलाम,
एकैपटक के के खान हुन्छ, के के हुदैन् ?
विराटनगर । हामीले दिनहुँ खाने खानाले हामीलाई पोषण तत्व र शक्ति प्रदान गर्छ । दैनिक काम गर्नको लागि होस् या हाम्रो स्वास्थ्य स्थितिलाई राम्रो गर्नको लागि होस् हामीले दैनिक खानेकुराले निकै महत्वपूर्ण
अधिक कोलेस्टेरोल नियन्त्रण गर्न के गर्ने ?
विराटनगर । कोलेस्टेरोल शरीरका प्रत्येक कोषहरूमा पाइने नरम चिल्लो पदार्थ हो । यसको उत्पादन प्रमुखरूपमा कलेजोमा हुने गर्छ । स्वस्थ्य जीवनका लागि कोलेस्टेरोल निकै आवश्यक हुन्छ । रगतमा पाइने बोसोलाई को
मौसमअनुकूल फल आरुवखडा शरीरका लागि निकै लाभदायक
आरुवखडाको मौसम भएकाले बजारमा जताततै आरुवखडा बेच्न राखेको देखिन्छ । मौसमअनुकूल फलफूल शरीरको लागि निकै लाभदायक हुन्छ । प्राकृतिक ढंगले बोटमै पाकेको आरुवखडा स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक पनि हुन्छ ।
रोग निको पार्ने घरेलु औषधि विरेनुन
प्राचिन काल देखिनै मानव सभ्यतामा विरेनुनलाई अति मूल्यवान मानिदै आइएको छ । विभिन्न अनुसन्धानका अनुसार बिभिन्न थरिका रोग निको पार्न विरेनुन संसारकै सबैभन्दा उत्तम नुन रहेको पनि साबित भएको छ । विरे नु
पाचन प्रणालीलाई सक्रिय बनाउने रायो सागका फाइदै फाइदा
स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखापरेमा हामीले अंकुरित भोजन, हरियो सागसब्जी, मौसम अनुसारको तरकारी तथा फलफुलको सेवन गरेमा हामीलाई निकै फाइदा पुग्ने हुन्छ । हामीले खाने रायोको साग सबै ठाउँमा सहज रुपमा पाइन
मःमः धेरै खाने गर्नु भएको छ भने यो एकपल्ट अवश्य पढ्नुहोस्
नेपालीहरुको सबैभन्दा मनपर्ने खाजा भनको मःमः हो । हामीमध्ये धेरैले दैनिकजसो खाजाको रुपमा मःमः नै बढी खाने गर्छौं । छिटो र मिठो पाइने भएकोले यसलाई सबले रुचाउने गर्छन् । हामीले सबै कुराको ठिक्क मात्रा खा
काँचो चना खानुहुन्छ ? यो पढ्नुहोस्
चनामा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन जस्ता पोषक तत्व पाइनुका साथै यसमा भरपुर मात्रामा आइरन, सोडियम कार्बोहाइड्रेट, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम तथा सेलेनियम पाउन सकिन्छ । अझ चनालाई तरकारीको रुपमा खानुभन्दा पनि
दैनिक बिहान खाली पेटमा ४ गिलास पानी पिउँदा हुन्छन् यस्ता फाइदा
पानी जीवनको श्रोत हो । यो हाम्रो शरीरका लागि एकदम अत्यावश्यक पदार्थ हो । हरेक जीवित व्यक्ति, जनावर, रुखबिरुवा, किरा फट्यांग्रालाई बाँच्नको लागि पानी एकदम आवश्यक हुन्छ । हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा पुग
हरियो धनियाँका अपत्यारिला फाइदाबारे जान्नुहोस्
हरियो धनियाँलाई स्वाद र सुगन्धको लागि भान्सामा प्रयोग गरिन्छ, जसले तरकारीलाई स्वादिलो र वास्नादार बनाउँछ । धनियाँलाई मसला वा औषधिको रुपमा प्रयोग गरिदैं आएको छ । धनियाँको पातलाई अचारका रुपमा वा तरकारी,
चाहिने भन्दा धेरै खाए हुन्छ धेरै हानी
विराटनगर । कहिले कहिँ खाने गर्दा हाम्रो पेट भरे पनि हाम्रो मन भर्ने हुदैन । त्यसैले, कहिले कहिँ हामी चाहिने भन्दा बेसी खाने गर्छौं । खानेकुरालाई अनियन्त्रित रुपमा खानु भनेको आफुलाई रोगि बनाउनु हो ।
चाहिने भन्दा धेरै खाए स्वास्थ्यलाई कस्तो हुन्छ हानी ?
कहिले कहीँ हाम्रो पेट भरिएपनि मन भरिदैन् । मन नभरिएका कारण कहिले कहीँ चाहिने भन्दा धेरै खाने गर्छौं । खानेकुरालाई अनियन्त्रित रुपमा खानु भनेको आफुलाई रोगी बनाउनु हो । हाम्रो शरीरलाई चाहिने मात्रामा खा
भित्रैबाट छाला स्वास्थ्य राख्न मद्दत गर्ने ५ फलफुल
सोमबार, २० जेठ, २०७६
विराटनगर । हामीले सधै हाम्रो छालालै सुन्दर र चम्किलो बनाउन निकै प्रयास गरिरहेका हुन्छौं । यसका लागि हामीले घरेलु उपायका साथ साथै विभिन्न प्रकारको केमिकल्स भएको कस्मेटिक्सको पनि प्रयोग गरिरहेका हुन
मोटोपन घटाउनका उपयोगी च्याउ
हामीले खाने गरेको फलफुल, तरकारी तथा अन्य खाने कुरामा हाम्रो स्वास्थ्यका लागि के तत्व पाइन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । तरकारीको रुपमा प्रयोग हुने च्याउ त्यस्तै महत्वपूर्ण खानेकुरा भित्र पर्दछ ।
थाेरै अण्डा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक, धेरै खाए के हुन्छ ?
अण्डा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ । अण्डामा भिटामिन ए, बी, बि १२, डी, इ, के, फस्फोरस, सेलेनियम, भिटामिन तथा जिंकलगायत पोषक तत्व पाइन्छ । विज्ञहरुका अनुसार एउटा अण्डामा यति धेरै पौष्टिक पदार्थ हुन्छ
विश्व दुध दिवस मनाइदै, दाँतको सुरक्षाकोलागि दुध छ उपयुक्त
शनिबार, १८ जेठ, २०७६
विराटनगर । स्वस्थ्य दाँतले केवल सुन्दरताको लागि मात्र नभई आत्मविश्वास बढाउन र शब्दको सहि उच्चरण गर्न पनि चाहिन्छ । दाँतकै कारणले मुस्कुराउन, चपाएर खान र अनुहारको आकार पनि मिलाएर राख्छ । अनि
धुम्रपानको कारण ६ सेकेण्डमा एक जनाको मृत्यु, लत छुटाउन यस्तो छ आर्युवेदिक तरिका
विराटनगर । तपाईलाई थाहा छ एक सिगरेट पिउदाँ ११ मिनेट आयु कम हुन्छ भन्ने ? , अनुसन्धानहरुका निष्कर्षले भने यस्तै देखाएको छ । धुम्रपानकै कारण विश्वमा हरेक ६ सेकेण्डमा १ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । लाम
आफैँ छुट्याउनुहोस् : चाउचाउ खाँदै हुनुहुन्छ या बिष ?
नेपालमा सबैभन्दा धेरै छिटो र मिठो खाइने खाजा हो । बच्चालाई मात्र नभएर जवान र बृद्धहरुलाई सम्म पनि चाउचाउ मन पर्ने हुन्छ । जत्तिनै स्वादिलो भएपनि चाउचाउको नियमित सेवनले हामीलाई विभिन्न प्रकारका रोग लग्
छालासम्बन्धी समस्या र डन्डीफोरबाट बच्न माछा खाने गर्नुहोस्
माछा र माछाबाट बनेका खानेकुरा बढी खाने गरेमा यसले हाम्रो मस्तिष्कलाई सधैं ताजा र तेज राख्नमा मद्दत पुर्याउँछ । हामीले मासुभन्दा पनि माछा धेर खानुपर्छ । रातो मासु पचाउनका लागि झन्डै ३२ देखि ३६ घन्टा ला
शाकाहारी गर्भवती महिलालाई हुन सक्छ, भिटामिन बी १२ को कमी
बुधबार, १५ जेठ, २०७६
काठमाण्डौँ । घरमा यदी कोही गर्भवती भएको छ भने हामी मध्ये धेरैले गर्भवतीलाई माछामासु खान कर गरिरहन्छौँ । पक्कैपनि आउने सन्तती र गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले माछामासु खानु अर्थात पौष्टिक त
आइतबार, ०५ जेठ, २०७६
विराटनगर । गर्मी बढेसंगै वरपर झिँगापनि बढ्न थाल्छ । घर, आगन, भान्सा र अझ गाँउघर तिर गोठदेखि लिएर सबैतिर झिँगाले एकखालको आतंक नै फैल्याउछ । घर वरपरको वातावरण फोहोर छ भने त त्य झनै झिंगा बढ्ने नै भयो
पेटमा ग्याँस भरिए सेवन गर्नुहोस् बेसार, यस्ता छन् यसका अन्य फाइदा
बेसार मसलाको रूपमा प्रयोग हुने वस्तु हो । यसको जरा खासगरी परिकारको रंग बदल्नको लागि प्रयोग गरिन्छ । बेसारलाई नेपालको पश्चीमेली भाषामा हदेली, हदेलो अथवा हल्दी भनिन्छ । हल्दीको रंग पहेंलो हुन्छ । हिन्दू
शुक्रबार, ०३ जेठ, २०७६
मुख्य रुपमा सोडियम क्लोराइडद्वारा बनेको एक प्रकारको खनिज पदार्थ हो । नुन मानव जीवनको लागी महत्त्वपूर्ण छ, यो मानव स्वादहरू मध्येको एक हो । एक अध्यनअनुसार एक वयस्क व्यक्तिले २००० मिलिग्राम भन्दा कम नुन
दिनमा कति पटकसम्म कफी पिउनु फाइदा ?
बिहिबार, ०२ जेठ, २०७६
कफी एक पेय पदार्थ हो । विश्वमा कफीलाई चिया पछिको दोस्रो प्रख्यात पेय पदार्थको रुपमा लिइन्छ । कफीमा स्फूर्ति ल्याउने क्याफिन हुन्छ । यसले मानसिक र शारीरिक थकान मेट्छ, अल्छिपन र निद्रा हटाउँछ । ठिक्क मा